खेलकुद Archives - VOICE OF NEPAL TV
काठमाडौं । नेपाली लेगस्पिनर सन्दीप लामिछाने बुधबार अष्ट्रेलिया प्रस्थान गरेका छन् । डिसेम्बर ५ बाट सुरु हुने विग ब्यास लिग क्रिकेटमा सहभागी हुन लामिछाने अष्ट्रेलिया प्रस्थान गरेका हुन् । विग ब्यासमा लामिछानेले होवार्ट हुरिकन्सकातर्फबाट खेल्ने छन् । होवार्टले आफ्नो पहिलो खेल सिड्नी सिक्सर्सविरुद्ध डिसे...
काठमाडौं | नेपाली महिला टिमले कतारविरूद्धको तीन खेलको टी-२० सिरिज एक खेल अगावै जितेको छ। बुधबार भएको दोस्रो खेलमा कतारलाई ६१ रनले पराजित गर्दै नेपालले सिरिज जितेको हो। यसअघि पहिलो खेलमा नेपालले कतारलाई ११९ रनले पराजित गरेको थियो। नेपाली महिला टिमले पहिलो पटक टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज जितेको हो। बुधबा...
काठमाडौं । शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ । एन्फा कम्प्लेक्स सातदोवाटोमा आयोजित एक कार्यक्रममा एन्फाको लिग कमिटीले खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो । अखिल नेपाल फुटबल संघ ‘एन्फा’को आयोजनामा हुन लागेको ए डिभिजन लिगमा १४ टिमले सहभागिता जनाउने भएका छन् । यही कात्तिक २९ गतेदेखि शुरु हुने लिगक...
काठमाडौं । ताजिकिस्तानमा जारी एएफसी २३ वर्ष मुनिको एसिया कप छनोटमा नेपालले कमजोर शुरुआत गरेको छ । नेपाल बलियो प्रतिद्धन्द्धी ईरानसँग ४÷० ले पराजित भयो । अर्पण कार्कीको कप्तानीमा मैदानमा उत्रिएको नेपालले मध्यान्तरसम्म गोलरहित बराबरी खेलेको थियो । खेलको १७ औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीलाई पनि ईरानले गोल गर्न ...
लन्डन। यूईएफए च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत भएको खेलमा इंग्लिस क्लब लिभरपुलले स्पेनिस क्लब एट्लेटिको मड्रिडलाई पराजित गरेको छ । समूह ‘बी’ अन्तर्गत मंगलबारराति लिभरपुलले १० खेलाडीमा सीमित घरेलु टोली एट्लेटिकोलाई ३–२ गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । वान्डा मेट्रोपोलिटानो स्टेडियममा पाहुना टोलीको जितमा मोहम्मद सला...
काठमाडौं । सरकारले साफ च्याम्पियनसिपको उपविजेता नेपाली फुटबल टोलीका खेलाडीहरूलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खेलाडीहरूलाई ५–५ लाख र प्रशिक्षकहरूलाई ३–३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । शनिबार राति भएक...
के नेपाली फुटबलले आज इतिहास रच्ला ?
काठमाडौं । आज नेपालका लागि फुटबलमा ऐतिहासिक अवसर छ । साफ च्याम्पियनसिपमा भारतलाई हराउन सके नेपालले पहिलोपटक उपाधि जितेर इतिहास बनाउनेछ । साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेर नेपाललाई इतिहास रचिसकेको छ । यसअघि नेपाल साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा कहिल्यै फाइनलमा पुग्न सकेको थिए । नेपालले राउन्ड रोबिनका आधारमा भए...
भारतसँग भिड्नु अघि अलमुताइरीले माल्दिभ्समा नेपाली फुटबल टोलीसंगै मनाए दशैँ !
काठमाडौं। साफ च्याम्पियनसीप खेल्न माल्दिभ्स पुगेको नेपाली फुटबल टोलीले आज उतै विजयादशमी मनाएका छन्। खेल अफिसिल, प्रशिक्षक र खेलाडीहरुले टीका र जमरा लगाएर विजयादशमी मनाएका हुन्। त्यसक्रममा नेपाली फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी लगायत खेल अफिसियलहरुले समेत टीका लगाएका थिए। भोलि (शनि...
इतिहास रच्दै नेपाल साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा
काठमाडौं । नेपाल पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । माल्दिभ्समा बुधबार भएको आफ्नो समूह चरणको अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग १-१ को बराबरी खेलेपछि नेपालले इतिहास रचेको हो । सन् १९९३ मा सुरू भएको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल यसअघि कहिल्यै फाइनलमा पुगेको थिएन । पहिलो शंस्करणमा तेस्रो भए...
ओमानसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल ७–२ ले पराजित
काठमाडौं । ओमानसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल पराजित भएको छ । गएराति कतारको दोहामा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल ओमानसँग ७–२ गोल अन्तरले पराजित भएको हो । साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपालले ओमानसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो । साफको तयारीका लागि नेपाली टिम कतारमा छ । नेपाली टिम कतारबाटै साफका लागि...